Uru na ọghọm nke Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Uru na ọghọm nke Ecommerce
Susana Maria Urbano Mateos | | Nche
Dị ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eji Intanet eme ihe na-abawanye, omume na-egosi na azụmahịa e-commerce ga-abụ ụzọ bụ isi iji wuchaa azụmahịa azụmahịa n'oge na-adịghị anya. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ eletriki na ndị ahịa na-emetụta onwe ha, ọ dị mfe ịmara ihe ha bụ uru na ọghọm nke Ecommerce.
1 Uru nke Ecommerce
2 Uzo ojoo nke Ecommerce
Uru nke Ecommerce
Nchekwa. Ngwaahịa niile na-adị mfe ịnweta na ;ntanetị; ihe ikwesiri ime bu ichogharia ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dịghị mkpa ịhapụ ụlọ iji zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọbụna ọrụ.
Oge nchekwa. Ecommerce nwekwara uru nke ndị ahịa anaghị egbusi oge na-achọ n'etiti aisles ma ọ bụ gbagoro n'okpukpu nke atọ. Na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ngwaahịa ndị a dị mfe ịchọta ma nwee ike ibuga ya n'ọnụ ụzọ ụlọ n'ime ụbọchị ole na ole.
Ọtụtụ nhọrọ. Ọ dịghị mkpa ịhapụ ụlọ iji zụọ ahịa; Nwere ike ịhọrọ site na ọnụọgụ ọnụọgụ enweghị oke, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara ihe, kamakwa n'ahịa. A na-enyekwa usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche, yabụ enwere ike ịchọta ihe niile dị mkpa n'otu ebe.
Ọ dị mfe iji tụnyere ngwaahịa na ahịa. Ka a na-ahụ ngwaahịa ndị ahụ n'ịntanetị, ha na nkọwa na njirimara na-esonyere ha, yabụ enwere ike iji ha tụnyere nke ọma, ọbụlagodi n'etiti ụlọ ahịa dị n'ịntanetị abụọ, atọ ma ọ bụ karịa.
Uzo ojoo nke Ecommerce
Nzuzo na nche. Nke a nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị anaghị enye ọnọdụ nchekwa na nzuzo niile iji chekwaa azụmahịa n'ịntanetị. Onweghi onye choro ka onye obula hu ihe omuma ya na ego ya, ya mere odi nkpa ichoputa saiti tupu izu ahia.
Ogo N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ecommerce na-eme ka usoro ịzụ ahịa niile dị mfe, onye na-azụ ahịa enweghị ike imetụ ngwaahịa ahụ aka ruo mgbe a ga-eweta ya n'ụlọ.
Ego zoro ezo. Mgbe ị na-azụta ihe n'ịntanetị, onye na-azụ ahịa maara ọnụahịa nke ngwaahịa, mbupu na ụtụ isi enwere ike, mana ọ ga-ekwe omume na enwere ego zoro ezo na-egosighi na akwụkwọ nzụta, mana n'ụdị ịkwụ ụgwọ.
Igbu oge na mbupu. Ọ bụ ezie na nnyefe ngwaahịa na-ebu ọnụ, ọnọdụ ihu igwe, nnweta, yana ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka mbubata ngwaahịa na-egbu oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » Uru na ọghọm nke Ecommerce
Alejandra Galvan dijo
Ezigbo Susana, edemede gị nyeere m aka nke ukwuu n'ihe omume ụlọ akwụkwọ m, ọ masịrị m otu ị si ede yana oru ngo
Zaghachi Alejandra Galván
Otu isiokwu foarte na-atọ ụtọ.
Ndị ọbịa 5 kacha mma maka saịtị Ecommerce
Holọ nkwakọ ngwaahịa na-arụ ọrụ dị ka ebe dị egwu na eCommerce